​भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क नमिल्दा राहत वितरणमा कठिनाइ
रमेश लम्साल काठमाडौँ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुनिस्ट र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरणमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा सङ्कलन गरेको भन्दा दुई लाख बढी तथ्याङ्क राहत..
​राहत वितरण र पुनःनिर्माणमा कुनै पनि कसर बाँकी राखिँदैन – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको आजको..
​मैले दरबार मात्रै छोडेको हुँ, घरबार छोडेको छैन, राष्ट्र र जनताको लागि आफ्नो भूमिकाको खोजि हुुनपर्ने :पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले दरबार छोडे पनि नेपालीको आधारको भार नछोडेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा आइतबार एक सन्देश दिदै शाहले..
​पाँच महिनामा रु तेत्तीस अर्ब राजस्व घाटा
वीरगन्ज । नेपालकै प्रमुख राजस्व असुली केन्द्र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आयात निर्यात ठप्प भएपछि रु ३३ अर्ब राजस्व घाटा भएको छ । आयात निर्यात ठप्प हुँदा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई चालु आवको..
​तिङ्कर र बझाङ नाका खुलाउन गृहकार्य
भीमदत्तनगर । सरकारले दार्चुलाको तिङ्कर र बझाङको उत्तरतर्फको नाका खुलाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले आज बिहान भीमदत्तनगरमा कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन, औद्योगिकलगायत सबै..
काठमाडौको बाटो भन्दा सवारी साधनको कुल लम्बाइ धेरै
ललितपुर । काठमाडौँमा सडकको लम्बाइ ४८ लाख फि र यहाँ सञ्चालनमा आएका सवारीका साधनको लम्बाइ जोड्दा कुल ५२ लाख फि भएको पाइएको छ । स्थानीय नागरिक सरोकार मञ्च नेपाल, महानगरीय ट्राफिक..
​नौ किलो ५०८ ग्राम सुनसहित तीन भारतीयलाई पक्राउ
काठमाडौँ । प्रहरीले अवैध रुपमा सुनको कारोबार गरिरहेको अवस्थामा भूगोल पार्कस्थित भाग्यलक्ष्मी ज्वेलर्सबाट नौ किलो ५०८ ग्राम सुनसहित तीन भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार उक्त अवैध..
​‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध तातो पिँडालु : राजदूत उपाध्याय
काठमाडौं । भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्धलाई सकारात्मक छलफलबाट सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत उपाध्यायले भारतले..
मुलुकमा दिगो शान्तिका लागि पैसा धेरै बाँडियो, तर धेरै प्रगति भएको देखिएन
काठमाडौँ । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग नियमावलीको अभावमा प्रायः निष्क्रिय रहन पुगेका छन् । मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गरी..
​वार्षिक करिब ५ अर्बको यार्सागुम्बा संकलन
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको यार्सागुम्बा संकलन हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘यार्सागुम्बाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।..
​भूकम्पपीडितलाई स्लिपिङ ब्याग
काठमाडौं । हिमालयन पिस एजुकेसन फाउण्डेसनले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका भूकम्पपीडित परिवारलाई स्लिपिङ ब्याग प्रदान गरेको छ । विद्यालय निर्माण र विद्यार्थीलाई शैक्षिक एवम् खेलकूद सामग्री सहयोग..
​भूकम्पपछि रोकिएको सम्पदा निर्माण सुरु
भक्तपुर । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि रोकिएको भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रभित्रका सम्पदा जीर्णोद्धार सुरु भएको छ । पुरातत्व विभाग तथा दरबार हेरचाह कार्यालय भक्तपुरले यहाँको बद्रीनारायण मन्दिर, दुईमाजूको मन्दिर, बालाखु..
​अर्को वर्षा लाग्ने समय आइसक्दासमेत जस्तापाता किन्ने पैसा पाएनन्
लमजुङ । वर्षायाममा भूकम्पपीडितलाई ओत लाग्ने ठाउँ बनाउने भन्दै सरकारले उनीहरुलाई दिने भनेको रु १५ हजार अझैसम्म पाउन नसक्दा पूर्वी लमजुङका नागरिक थप समस्यामा छन् । अर्को सालको बर्खा लाग्ने समय..
​नकारात्मक टिप्पणी प्रति नयाँ दिल्ली चिन्तित
काठमाडौ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले हाल मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहज अवस्थालाई समाधान गर्न परिणाम देखिने गरी सबैले आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । हाल नेपालमा रहनुभएका..
​जनतालाई लोडसेडिङ गरी उद्योगीलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् दिइएकामा आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाल प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घसंस्थाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विशेष फिडर मार्फत विद्युत् दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घसंस्थाले आज..
​जुम्लामा रु तीन करोड सत्र लाख राजस्व सङ्कलन
जुम्ला । करदाता सेवा कार्यालयले आव २०७१÷७२ मा रु तीन करोड १७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । करदाता शिक्षा तथा करदाता राज्यप्रति उत्तरदायी भएकै कारण राजस्वमा वृद्धि भएको हो ।..
​नाकाबन्दीले साढे बाह्र लाख भूकम्पपीडित भोकमरीको चपेटामा
कालिका खड्का काठमाडौं । “भुइँचालोले घर लग्यो, दुःखजिलो गरी पालमा बस्दै आएका थियौँ, अहिले त ग्यास छैन, भोकभोकै” – पासाङल्हामु चोक नजिकै महाङ्कालको चौरमा बस्दै आउनुभएकी शान्ति गुरुङले सुनाउनुभयो । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले..
​दलालले लगेका एघार युवती भारतमा बेपत्ता
गोविन्द लामिछाने इलाम, । दलालको प्रलोभनमा परी एक वर्षको अवधिमा पूर्वी नाकाबाट रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका १७ युवतीमध्ये ११ जना अझै फेला परेका छैनन् । माइती नेपाल पशुपतिनगर आवधिक गृहले दिएको जानकारीअनुसार..
​मुक्त घोषणा भएको ८ बर्ष पछि पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा हलियाको बिचल्ली
सुशील दर्नाल÷शर्मिला पाठक काठमाडौँ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेअनुसार पुनःस्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि वास्तविक हलियाले अझै परिचयपत्र..
​रेडक्रसद्वारा थप तीन हजार राहत पुनः वितरण गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी साँखु उपशाखा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आइएफआरसी)को सहयोगमा यहाँका भूकम्पपीडितलाई आज र भोलि थप रु तीन हजार वितरण गरिँदै छ । सरकारले बाँड्ने..
के होला त आजै सहमति ? तीन दल र मोर्चाको कार्यदलबीचमा बुँदागत छलफल सुरु
काठमाडौँ, । तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागबारे छलफल गर्न गठित प्रमुख तीन दल र मोर्चाको कार्यदलबीच आज सिंहदरबारमा बुँदागत छलफल सुरु भएको छ । दुवै कार्यदलका बीचमा मोर्चाका ११..
​नेकपा माओवादीका सेक्रेटरीसहित चारजना आगजनी अभियोगमा पक्राउ
झापा । झापाको दुवागढी–९ स्थित प्रगतिटोलमा रहेको साकम्बरी प्रोडक्ट ९गुट्खा उद्योग० मा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले नेकपा माओवादीका झापा सेक्रेटरीसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । माओवादीका झापा सेक्रेटरी विवश किराँती, जिल्ला..
​पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउन माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल ९समानान्तर० ले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । राप्रपा नेपाल समानान्तर केन्द्रीय समितिले आज एक प्रेस..
​माओबादी जनयुद्धमा बेपत्ता भएकाको सम्झनामा प्रतीक्षालय
बागलुङ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएकाका परिवारले बागलुङमा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरेका छन् । बेपत्ताजनको खोजीमा राज्यलाई दबाब दिन र उनीहरुको सम्झनामा बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा प्रतीक्षालय निर्माण..
​उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम परीक्षणपछि विश्वव्यापी तरङ्ग
सोल । उत्तर कोरियाले बुधबार हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको समाचारले विश्वव्यापीरुपमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । उसको यो घटनाको विश्वव्यापीरुपमा निन्दा गरिएको छ भने छिमेकी देश दक्षिण कोरियाले यसबाट उत्पन्न..
​कर्णालीको विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजना चाहिने : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीको विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको चौंथौ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले..
​सरकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई सहज अनुभूत गराउन गृह मन्त्रालयका २९ बुँदे योजना
काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा जनताले तत्काल अनुभूत गर्नसक्ने गरी २९ बुँदे सोच प्राथमिकता तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोच प्राथमिकता..
जिन्सी सामग्रीको सुरक्षा र लिलामी अदालतलाई बोझ
मोरङ । जिम्मामा आएका जिन्सी सामग्री लिलाम र सुरक्षित भण्डारण गर्न यहाँका अदालतलाई बोझ बनेको छ । मुद्दाको फैसलापछि जिम्मा आएका सुनचाँदी, मोटरसाइकल, कम्प्युटर, कार जिप, हातहतियार आदि मालवस्तु थन्काउन व्यवस्थित..
हाइड्रोजन बम परीक्षणका कारण उत्तर कोरियाको धर्ति हल्लिएको खुलासा
एजेन्सी । हाइड्रोजन बम परीक्षणका कारण उत्तर कोरियाको धर्ति हल्लिएको छ । उत्तर कोरियामा ५।१ तिब्रताको झड्का रेकर्ड गरिएको थियो । सुरुमा भूकम्प झैँ लागेको सो झड्का भूकम्प नभई उसले..
​विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण
वीरगन्ज । जाडो र शीतलहरबाट अति प्रभावित पर्साको सिर्सिया खल्वाटोला गाविसका अतिगरिब, विपन्न र निःसहायलाई कम्बलसहित न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ डायमन्ड वीरगन्जले सो गाविसमा रहेका अतिगरिब..
Results 1994: You are at page 61 of 67